Natao omaly 15 oktobra 2020, tao amin’ny “Maison des élus” Antsohihy ny Filan-kevitry ny Governoram-paritra voalohany. 16 octobre 2020
Nitarika izany ny Filoha Andry Rajoelina sy ny Praiminisitra Christian Ntsay. Tonga nanatrika ny Filankevitra avokoa ny Governora miisa 18 voatendry. Nandritra io, nasaina nanao tatitra ny asa vitany sy ny tetikasa mbola hotanterahiny ny governora.
Nanantitra koa ny Filoha fa :“Tsy maintsy hirosoana ny fanendrena ny Governora amin’ny faritra tsy mbola misy izany”.